Indawo yokuhlala ePark, Uroczysko Połomja
Ikhululekile kwaye yangoku (yagqitywa ngo-2016) umgangatho ophantsi we-2 ukuya kubantu abane (+ junior bed 165 cm), ebekwe kwipaki endala, inxalenye yendawo enkulu (36 hektare) yangasese yangaphambili yendawo yokusila "Uroczysko Połomja", ebekwe kwiJurassic Landscape Park. Pow. I-cottage yi-47m2, kubandakanywa negumbi lokulala eliphindwe kabini, ikhitshi kunye negumbi lokuhlala elinebhedi ye-sofa (abantu aba-2), igumbi lokuhlambela elinendlu yangasese kunye neshawa, igumbi eline-wardrobe kunye nebhedi encinci. I-Terrace ene-awning (14 m2), ifenitshala yegadi kunye ne-barbecue. I-intanethi ekhawuleza kakhulu.
Indlu inegumbi lokudlela kunye nekhitshi kunye negumbi lokuhlala (23.6 m2 iyonke), i-6.26 m2 yokuhlambela, i-10 m2 yokulala, igumbi eline-wardrobe ye-5.5 m2, i-corridor ye-1.5 m2. Ikhitshi ixhotyiswe ngefriji, i-dishwasher, i-oven ye-microwave, i-induction hob yombane ye-2 burners, umenzi wekofu, i-jug yombane, i-toaster toaster, umxube wezandla, izixhobo ezigcweleyo ezineembiza, iipani, izitya kunye ne-cutlery. Indawo yokutyela kunye neyokuhlala ixhotyiswe ngeTV ye-intshi ye-43, itafile yokutya, izihlalo ezi-4, i-sofa edibeneyo (150x200cm), itafile yekhofi, ibhentshi yezicathulo, ibhentshi yokuhlala. Inethi yeengcongconi efestileni. Igumbi lokulala lixhotyiswe ngebhedi ephindwe kabini i-160 x 200 cm kunye neebhedi zabantu aba-2, itafile esecaleni kwebhedi, isifuba se-drawers kunye ne-3 drawers, izibane ezi-2 ngaphezu kwebhedi, kunye ne-hanger yokuma. Inethi yeengcongconi efestileni. Igumbi elincinci lixhotyiswe ngebhedi ye-90 / 165cm yabantwana kunye nebhedi, i-wardrobe ye-2-door, i-bookcase eneshalofu, i-armchair, i-mosquito net efestileni. Igumbi lokuhlambela lixhotyiswe nge-cubicle yeshawa ye-90x90cm, indlu yangasese, i-bidet, isitya sokuhlamba, iikhabhinethi ezi-2 ezinesibuko, isethi yeetawuli, isomisi seenwele, i-heater eyongezelelweyo - i-blower blower. Iindwendwe ziyakwazi ukufikelela kumatshini wokuhlamba kunye ne-vacuum cleaner. Kwi-terrace, i-awning enemoto yombane, itafile, izitulo ezi-4, i-barbecue.
Ejikeleze indlu, kukho ipaki, ihlathi, i-meadow, amachibi, umlambo, i-waterfall, izakhiwo zefama kunye nendlu yabanini kwindawo yangasese.
Ifulethi liyinxalenye yendawo yokuhlala ebekwe kwindawo ezolileyo, kude nommandla, kwaye kwangaxeshanye kuphela iimitha ezingama-350 ukusuka kwindlela yebhayisekile edibanisa neendlela zebhayisekile zeJurassic. Ukusuka apha, ngaphantsi kweekhilomitha ezi-2.5 ukuya kumbindi we-Żarki, indawo enomtsalane kubakhenkethi, umz. imyuziyam yezobugcisa zakudala kwindawo yokusila endala, imiboniso e-Żary, amangcwaba amaJuda - amangcwaba amadala amaJuda, ukwenziwa kwelollipop, kunye nabanye) , ngaphantsi kwe-3.5 km engcwele of Our Lady of Leśniów Patroness Iintsapho, 10 km ukuya inqaba e Mirów kunye Bobolice, akayi kunambathisa kakhulu ngakumbi na Złoty Potok (trout afreshi lunghekerile, ipaka intambo, iindawo zokuqubha, Krasiński komkhulu, zokutyela ezininzi ), kwiikhilomitha ezimbalwa neendlela zokugwencela, amaqhosha ebhutsi amahashe kunye neefama zeCARP kwi Helenówka (3.5 km) kunye nezinye iindawo ezikufuphi i Krakow-Częstochowa Jura. Iikhilomitha ezimbini ukuya kwivenkile yesaphulelo, iimitha ezingama-350 ukuya kwivenkile yegrosari, indawo yokubhaka kunye ne-ayisikrimu.
Kwindawo yethu, kukho ii-gazebos ezi-2, ii-hammocks epakini, indawo yomlilo, iibhayisekile, itafile ye-ping-pong (ehlotyeni), i-badminton / i-volleyball net, iindlela zehlathi kwihlathi labucala, ujingi ngasechibini. , ibrayi kunye yokudlalela mini kubantwana jinga, ibhokisi yesanti, zeslayidi ehlotyeni echibini lokuqubha. Sikwanazo neekati ezi-2, inja (egcinwe entanjeni), ihoko yenkukhu kunye namaqanda amatsha e-eco asuka kwizikhukukazi zethu ezinemilenze eluhlaza. Kunokwenzeka ukuba u-odole ukutya kwimikhosi. Ngesicelo, sinokunika ibhedi enebhedi, isihlalo somntwana, ibhafu. Ipaki yemoto yasimahla phantsi kwekhusi.
Kwelinye icala lebhadi kukho iPod Klonem Apartment (ebonakala kwiAirBnB) nakwisakhiwo esisemlanjeni ezinye ezi-2 zezindlu zethu: IApartment Młynarza, iApartment Przy Stawach kunye neMłyn Tenderowizna ekhaya leeholide (zonke 3 izithuba ezikhoyo kwiAirBnB) .
Kukho abantu abaqhuba ifama kwindlu esebumelwaneni. Abamkeli zindwendwe beza kwindlu eselumelwaneni maxa wambi phakathi evekini nangeempelaveki.